သတင်း - အပူချိန်မြင့်မားသောဘောလုံးအဆို့ရှင်
အရည်သယ်ဆောင်သည့်စနစ်တွင်၊ အဆို့ရှင်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောထိန်းချုပ်မှုအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးအဓိကအားဖြင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ဆန့်ကျင်ဖက်စီး ၀ င်မှု၊ အဆို့ရှင်ကိုစက်မှုနှင့်မြို့ပြနယ်ပယ်များတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ မြင့်မားသောအပူချိန်အဆို့ရှင်သည်အဆို့ရှင်များတွင်အသုံးပြုသောအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏သီးခြားဂုဏ်သတ္တိများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - ကောင်းမွန်သောငြိမ်းသတ်နိုင်မှုစွမ်းရည်၊ ကောင်းသောဂဟေ; ကောင်းမွန်သောသက်ရောက်မှုကိုစုပ်ယူခြင်း၊ ၎င်းအားအကြမ်းဖက်မှုကြောင့်ပျက်စီးစေခြင်း၊ ဒေါသသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုနည်းသည်။ အပူချိန်မြင့်သောအဆို့ရှင်များစွာရှိသည်။ ပိုမိုများပြားသောအပူချိန်များသည်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်, အပူချိန်မြင့် ဘောလုံးအဆို့ရှင်, မြင့်မားသောအပူချိန် filter များနှင့်မြင့်မားသောအပူချိန် တံခါးအဆို့ရှင်.
အပူချိန်မြင့်သောအဆို့ရှင်များသည်မြင့်မားသောအပူချိန်ရှိတံခါးအဆို့ရှင်များ၊ မြင့်မားသောအပူချိန်ပိတ်သောအဆို့ရှင်များ၊ အပူချိန်မြင့်မားသောစစ်ဆေးမှုအဆို့ရှင်များ၊ အပူချိန်မြင့်ဘောလုံးအဆို့ရှင်များ၊ အပူချိန်မြင့်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်များ၊ အပူချိန်မြင့်အပ်အပ်အဆို့ရှင်များ၊ အဆို့ရှင်လျှော့ချအပူချိန်မြင့်ဖိအား။ ၎င်းတို့အနက်များသောအားဖြင့်အသုံးပြုသောတံခါးပေါက်အဆို့ရှင်များ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆို့ရှင်များ၊ အဆို့ရှင်များ၊ ဘောလုံးအဆို့ရှင်များနှင့်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်များဖြစ်သည်
မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်အလုပ်လုပ်သောအခြေအနေများတွင်အဓိကအားဖြင့်နိမ့်သောမြင့်မားသောအပူချိန်၊ မြင့်မားသောအပူချိန်Ⅰ၊ မြင့်မားသောအပူချိန်Ⅱ၊ မြင့်မားသောအပူချိန်Ⅲ၊ မြင့်မားသောအပူချိန်Ⅳနှင့်မြင့်မားသောအပူချိန် include တို့ပါ ၀ င်သည်။
1. Sub- မြင့်မားသောအပူချိန်
နိမ့်သောအပူချိန်ဆိုသည်မှာအဆို့ရှင်၏အလုပ်လုပ်သောအပူချိန်သည် ၃၂၅ နေရာတွင်ရှိသည် ～425 ℃။ အကယ်၍ အလတ်စားသည်ရေနှင့်ရေငွေ့ဖြစ်ပါက WCB, WCC, A105, WC6 နှင့် WC9 ကိုအဓိကအသုံးပြုသည်။ အကယ်၍ အလယ်အလတ်သည်ဆာလ်ဖာပါဝင်သောဆီဖြစ်ပါကအဓိကအားဖြင့်ဆာလ်ဖိုက်မှထုတ်ယူနိုင်သည့် C5, CF8, CF3, CF8M, CF3M စသည်တို့ကိုအသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းတို့ကိုလေထုနှင့်ဖိအားလျှော့ချသည့်စက်များနှင့်သန့်စင်သောစက်ရုံများတွင်နှောင့်နှေးသော coke devices များတွင်အသုံးပြုကြသည်။ ဤအချိန်တွင် CF8, CF8M, CF3 နှင့် CF3M တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအဆို့ရှင်များသည်အက်ဆစ်ဖြေရှင်းချက်များ၏ချေးနိုင်စွမ်းကိုမသုံးသော်လည်းဆာလ်ဖာပါဝင်သောရေနံထုတ်ကုန်များ၊ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများတွင်အသုံးပြုသည်။ ဤအခြေအနေတွင်အများဆုံးအလုပ်လုပ်သောအပူချိန် CF8, CF8M, CF3 နှင့် CF3M ၏ 450 ° C.
အဆို့ရှင်၏အလုပ်လုပ်အပူချိန် 425 အခါ ～550 ℃၎င်းသည်အပူချိန်မြင့်မားသော I (PI class ဟုရည်ညွှန်းသည်) ဖြစ်သည်။ PI တန်းအဆို့ရှင်၏အဓိကပစ္စည်းမှာ“ အပူချိန်Ⅰအဆင့်အလတ်စားကာဗွန်ခရိုမီယမ်နီကယ်ရှားပါးဒြပ်စင်အရည်အသွေးမြင့်အပူဒဏ်ခံသံမဏိ” ဖြစ်ပြီး CF8 သည် ASTMA351 စံ၏အခြေခံပုံစံဖြစ်သည်။ PI အမျိုးအစားသည်အထူးနာမည်ရှိသောကြောင့်အပူချိန်မြင့်သောသံမဏိ (P) ၏အယူအဆကိုဤနေရာတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ထို့ကြောင့်အလုပ်လုပ်သောအလတ်စားမှာရေသို့မဟုတ်ရေငွေ့ဖြစ်လျှင်အပူချိန်မြင့်သံမဏိ WC6 (t≤540℃) သို့မဟုတ် WC9 (t≤570℃) ကိုလည်းသုံးနိုင်သည်။ ဆာလ်ဖာပါဝင်သောရေနံထုတ်ကုန်များကိုလည်းမြင့်မားသောသံမဏိဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ C5 (ZG1Cr5Mo)၊ သို့သော်၎င်းတို့ကိုဤနေရာတွင် PI-class ဟုခေါ်။ မရပါ။
3. မြင့်မားသောအပူချိန် II ကို
အဆို့ရှင်၏အလုပ်လုပ်အပူချိန် 550 ဖြစ်ပါတယ် ～650 ℃၎င်းကိုမြင့်မားသောအပူချိန် classified (P as ဟုခေါ်သည်) ဟုခွဲခြားသည်။ PⅡအဆင့်မြင့်အပူချိန်အဆို့ရှင်ကိုရေနံချက်စက်ရုံ၏လေးလံသောဓာတ်ကူပစ္စည်းခွဲစိတ်စက်တွင်အဓိကအသုံးပြုသည်။ ၎င်းတွင်မြင့်မားသောအပူချိန်နံရံဒဏ်ခံနိုင်သောခံနိုင်ရည်ရှိသည့်တံခါးအဆို့ရှင်ပါ ၀ င်သောလည်ပတ်သုံးခုနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများတွင်အသုံးပြုသည်။ PⅡတန်းအဆို့ရှင်၏အဓိကပစ္စည်းမှာ“ မြင့်မားသောအပူချိန်Ⅱတန်းအလတ်စားကာဗွန်ခရိုမီယမ်နီကယ်ရှားပါးသတ္တုစပ်တိုက်တေနီယမ်အပူခံနိုင်ရည်ရှိသောသံမဏိ” ဖြစ်ပြီး ASTMA351 စံသတ်မှတ်ချက်တွင် CF8 သည် CF8 ဖြင့်အခြေခံပုံစံဖြစ်သည်။
4. မြင့်မားသောအပူချိန် III ကို
အဆို့ရှင်၏အလုပ်လုပ်အပူချိန် 650 ဖြစ်ပါတယ် ～730 ℃, ၎င်းကိုမြင့်မားသောအပူချိန် III အဖြစ် (PⅢအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်) အဖြစ်ခွဲခြားထားသည်။ PⅢအဆင့်မြင့်အပူချိန်အဆို့ရှင်များကိုအဓိကအားဖြင့်သန့်စင်စက်ရုံများရှိကြီးမားသောရေနံ catalytic cracking unit များတွင်အဓိကအသုံးပြုသည်။ PⅢအမျိုးအစားမြင့်အပူချိန်အဆို့ရှင်၏အဓိကပစ္စည်းသည် ASTMA351 ကို အခြေခံ၍ CF8M ဖြစ်သည်။
အဆို့ရှင်၏အလုပ်လုပ်အပူချိန် 730 ဖြစ်ပါတယ် ～816 ℃, ၎င်းကိုမြင့်မားသောအပူချိန် IV အဖြစ်သတ်မှတ်သည် (တိုတိုအတွက် PIV ဟုလည်းညွှန်းသည်) ။ PIV အဆို့ရှင်၏အလုပ်လုပ်အပူချိန်၏အထက်အနိမ့်ဆုံးမှာ ၈၁၆ is ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အဆို့ရှင်ဒီဇိုင်းအတွက်ရွေးချယ်ထားသောစံ ASMEB16134 ဖိအား - အပူတန်းသည်အမြင့်ဆုံး 816 ℃ (1500υ) ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အလုပ်လုပ်သောအပူချိန်သည် ၈၁၆ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်ကျော်လွန်ပြီးနောက်သံမဏိသည်ပြုလုပ်သောအပူချိန်ဒေသထဲသို့ ၀ င်ရန်နီးကပ်သည်။ ဤအချိန်တွင်သတ္တုသည်ပလပ်စတစ်ပုံသဏ္formationာန်ပုံသဏ္zoneာန်ဇုန်တွင်တည်ရှိပြီးသတ္တုသည်ပလပ်စတစ်ကောင်းသောဖြစ်ပြီး၊ မြင့်မားသောဖိအားနှင့်သက်ရောက်မှုအားခံနိုင်ရည် ရှိ၍ ၎င်းကိုပုံပျက်။ မထားရန်ခက်ခဲသည်။ P Ⅳအဆို့ရှင်၏အဓိကပစ္စည်းမှာ CF8M ဖြစ်ပြီး ASTMA351 စံ၏အခြေခံပုံသဏ္asာန်ဖြစ်သောမြင့်မားသောအပူချိန်Ⅳအလယ်အလတ်ကာဗွန်ခရိုမီယမ်နီကယ် molybdenum ရှားပါးဒြပ်စင်တိုက်တေနီယမ်တန်တာလမ်အပူခံနိုင်ရည်ရှိသောသံမဏိဖြစ်သည်။ CK-20 နှင့် ASTMA182 စံ F310 (C ပါဝင်မှု 1001050% အပါအ ၀ င်) နှင့် F310H အပူခံနိုင်သောသံမဏိများ။
အဆို့ရှင်၏အလုပ်လုပ်သောအပူချိန်သည် ၈၁၆ than ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ PⅤ၊ PⅤမြင့်မားသောအပူချိန်အဆို့ရှင် (အပိတ်အဆို့ရှင်များအတွက်၊ လိပ်ပြာအဆို့ရှင်များကိုထိန်းညှိခြင်းမရှိသော) အနေဖြင့်အထူးဒီဇိုင်းများကိုအသုံးပြုရမည်။ အဆို့ရှင်၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုသေချာ။ ထို့ကြောင့်၊ အဆို့ရှင်၏အပူချိန်အမြင့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်ကိုတိတိကျကျမဖော်ပြထားပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိန်းချုပ်သောအဆို့ရှင်၏အလုပ်လုပ်သောအပူချိန်ကိုပစ္စည်းဖြင့်သာမက၊ အထူးဒီဇိုင်းပုံစံများနှင့်ဒီဇိုင်းပုံစံ၏အခြေခံနိယာမအားဖြင့်ပါသတ်မှတ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည် အတူတူပါပဲ PⅤအဆင့်မြင့်အပူချိန်အဆို့ရှင်သည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကုန်ကြမ်းများကိုရွေးချယ်နိုင်ပြီးယင်း၏လည်ပတ်မှုအလတ်စားနှင့်အလုပ်လုပ်သောဖိအားနှင့်အထူးဒီဇိုင်းပုံစံများအရအဆို့ရှင်နှင့်တွေ့နိုင်သည်။ PⅤအဆင့်မြင့်အပူချိန်အဆို့ရှင်တွင်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် flue flapper အဆို့ရှင်သို့မဟုတ်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်၏ flapper သို့မဟုတ် butterfly အဆို့ရှင်ကိုအများအားဖြင့် HK-30 နှင့် HK-40 မြင့်မားသောအပူချိန်သတ္တုစပ် ASTMA297 စံသတ်မှတ်ချက်မှရွေးချယ်သည်။ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်းစျေးနှုန်းနှင့်ဖိအားမြင့်မားသောဝန်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။